वादी समुदायका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्यायो ३ करोडको बजेट, कस्ता छन् योजना ? – Artha Sarokar- Sudurpaschim Edition
वादी समुदायका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्यायो ३ करोडको बजेट, कस्ता छन् योजना ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा वादी समुदायको माग सम्बोधन गरेको छ । मंगलबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले वादी समुदायको उत्थानका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन् ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शाहले वादी जातीको संरक्षण, संस्कृतिको जर्घेना र रोजगारी सृजना गर्नका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो । केही समय अघिमात्रै सुदूरपश्चिमका वादी समुदायका महिलाहरुले सरकारले आफुहरुको समस्या नहेरेको भन्दै बाध्यात्मक यौन पेशाका लागि लाईसेन्स माग्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।